Al-Shabaab oo saakay arrin la yaab leh ka sameeyay Buulo-Burte |
Al-Shabaab oo saakay arrin la yaab leh ka sameeyay Buulo-Burte
Silvitra tab without prescription, Zoloft reviews. Inta la ogyahay 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidamada AMISOM ayaa ku geeriyooday dagaal toos ah iyo weerarr xooggan oo saakay hiiradii ururka Al-Shabaab ay ku asteesay degmada Buulo-burte ee gobalka Hiiraan.
Dagaalka oo billowday saakay aroortii ayaa la isku adeegsaday hub culus waxaana markii dambe ku soo biiray ciidamada AMISOM.
Intii dagaalka uu socday waxay Shabaab gudaha u galeen Hotelka Camalow oo ku yaalla degmada Buulo-burte, Hotelka waxaa deggan saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda, waxaana ay halkaas ku dileen labo sarkaal oo ka mid ah kuwa Jabuuti.
Kooxda weerartay hotelka ayaa la sheegay in ay xirnaayeen dareeska ciidamada dowladda waxaana tiradooda lagu sheegay ilaa 10 kuwaasoo aad u hubeysnaa.
Daryanka rasaasta ayaa laga maqlayay qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada intii weerarka uu socday, waxaana intii dagaalka uu socday hakad ku yimid isku socodka dadka iyo gaadidka waxaa la xiray goobaha ganacsiga iyo waxbarashadda ee magaalada.
Ma jirto wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay maamulka dowladda ee degmada Buulo-burte iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti oo ku aadan dagaalka iyo weerarka saakay Shababa ku qaaday Buulo-burte.
Al-Shabaab oo horaantii bishan laga qabsaday Buulo-Burte ayaa dhowr jeer soo weerartay magaalada balse ilaa hadda uma suuragalin in ay qabsato.
Buulo-Burte waa degmo muhiim u ah isku xirka gobalada dhexe ee dalka Soomaaliya.